Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing 737 MAX 7 mamita ny sidina voalohany mahomby
Nahavita ny sidina voalohany nataony androany ny 737 MAX 7 vaovao an'i Boeing. Ny fiaramanidina dia mijanona amin'ny fandaharam-potoana ary manomboka programa fitsapana sidina feno manomboka amin'ny fanamarinana sy ny fandefasana amin'ny 2019.
"Ny zavatra rehetra hitanay nandritra ny sidina androany dia mampiseho fa ny MAX 7 dia manao araka ny famolavolana azy", hoy i Keith Leverkuhn, filoha lefitra ary tale jeneralin'ny programa 737 MAX, Boeing Commercial Airplanes. "Fantatro fa ireo mpanjifan'ny sidina dia hankafy ny fahaiza-manao entin'ity fiaramanidina ity ho an'ny fiaramanidina."
Notarihin'ny kapitenin'ny fitsapana sy ny fanombanana an'i Boeing, Jim Webb sy Keith Otsuka, nahavita sidina naharitra adiny 3 sy 5 minitra ny fiaramanidina, niainga avy tao Renton Field any Renton, Wash., Tamin'ny 10:17 maraina tany Pasifika, ary niantsona tamin'ny 1:22 hariva ao amin'ny Boeing Field any Seattle. Ny fiaramanidina dia nosedraina tamin'ny fanaraha-maso ny sidina, ary koa ny fanamarinana ny rafitra sy ny kalitao fikirakirana.
Ny fiaramanidina dia mpikambana fahatelo sy vaovao amin'ny fianakavian'i Boeing 737 MAX novokarina, miaraka amina mpandeha 172 ambony indrindra. Ny MAX 7 dia manana andiam-dranomasina 3,850 XNUMX, izay lava indrindra amin'ny fiaramanidina fianakaviana MAX. Natao ho an'ny fampisehoana miavaka ho an'ny mpanjifa fiaramanidina manidina amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny toerana avo sy toetr'andro mafana.
"Ny MAX 7 dia hanome zotram-piaramanidina mahomby amin'ny fanokafana sy fanidinana tsena mahia ary hiditra amin'ny seranam-piaramanidina sarotra, sady mankafy ny tombony rehetra amin'ny maha-anisan'ny fianakavian'i 737 MAX," hoy i Randy Tinseth, filoha lefitry ny Marketing, Boeing Commercial Airplanes.
Ny MAX 7 ihany koa dia manolotra fahombiazana ambony noho ny fifaninanana, mitondra mpandeha 12 fanampiny 400 kilometatra lavitra kokoa noho ny A319neo, amin'ny vidin'ny solika 7 isan-jato.
Ny fianakaviana 737 MAX dia mampiditra ny masinina CFM International LEAP-1B farany, ny elatra farany Advanced Technology, Boeing Sky Interior, ny seho fiandrasana sidina lehibe ary ny endri-javatra hafa mba hanomezana fahombiazana, fahamendrehana ary fampiononana ambony indrindra amin'ny tsena tokana.
Ny 737 MAX no fiaramanidina be mpividy indrindra amin'ny tantaran'ny Boeing, nahangona kaomandy mihoatra ny 4,300 avy amin'ny mpanjifa 93 manerantany.